Mpitondra taxi eto Antananarivo : “be loatra ny vesatra mahazo anay, tsy araka ny miditra” | NewsMada
Mpitondra taxi eto Antananarivo : “be loatra ny vesatra mahazo anay, tsy araka ny miditra”
« Mandalo fotoan-tsarotra efa hatramin’ny ela ny taxi, azo lazaina aza fa tsy mahavelona izao ity asa ity, saingy tsy manan-tsafidy, indrindra amin’izao taonanay izao”, hoy ny mpitondra taxi iray, 64 taona, sady tompona fiara. Manazava ity mpamily ity ny amin’ireo olana isan-karazany sedrain’izy ireo izay manao ny asany ara-dalàna. 7.000 any ho any ny isan’ny taxis eto an-dRenivohitra, nefa ny 50 % amin’ireo na mahery aza, miasa tsy ao anatin’ny ara-dalàna, tsy manao fanambarana. « Olana iray voalohany manimba ny asanay ireo miasa tsy manana taratasy ireo”, hoy ilay rangahy 64 taona.
Notanisainy avokoa avy eo ireo olana isan-karazany iombonan’ny mpitatitra, noho ny fiakaran’ny vidin-tsolika, kojakoja fanolo amin’ny fiara, saram-piantohana, ankoatra ny vola tsy maintsy aloa amin’ny fanjakana sy ny kaominina. “Manampy ireo ny otra ataon’ny polisy na ara-dalàna ny fiaranao na tsia”, hoy izy. Mbola miantraika amin’ny asanay ny lalan-dratsy, fitohanan’ny fifamoivoizana, tsy fandriampahalemana. Koa tsy mahagaga raha mitombo isa ireo miasa tsy misy taratasy, satria be loatra ny vesatra mahazo anay tsy araka ny miditra”, hoy ihany izy.
Vitsy ny sahy manofa fiara izao
Raha ny karama indray nasiany teny, nambarany fa zara raha misy izao ny olona misafidy handeha taxi satria te hilamina fotsiny. Izay maika mamonjy fotoana, mitondra marary na entana, ireny no betsaka manontany azy ireo izao. Izay no mahatonga azy ireo mijanona amina toerana iray miandry mpandeha manontany. “Rehefa mifanaraka amin’ny karama, vao mba mampidina lasantsy kely”.
Noho izay fahasarotana fahitana karama izay ny antony mahabetsaka ny tompony mitondra ny fiarany ihany. Vitsy ny sahy manofa fiara izao, satria sao miala am-paosy indray tsy mahita ny hamenoana izay nifanarahana. Endrika iray mampiseho fa mbola marofy ny toekarena, indrindra eny anivon’ny vahoaka maro anisa.